Xuska 8 Maarso oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Munaasabada 8,Maarso oo ah maalinta caalamiga ee Haweenka Aduunka oo maanta lagu qabtay xarunta Gaadiidka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee magaaladda Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ,Wasiiro ka tirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya,Xildhibaano,Taliyaha hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka,Haweenka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir,Ururada Haweenka ee ka jira gobolka Banaadir iyo gobolada dalka qaar,Ururada u dhaq dhaqaaqa Xuquuqda Haweenka,Ardayda Jaamcadaha ,Fanaaniin ay ka mid tahay Fanaanada Muslimo Qaasim Hilowle iyo marti sharaf kale.
Goobta munaasabada 8,da maarso ay ka dhaceysay ayaa dhamaan dadkii kala duwanaa ee ka soo qeyb galay xuska maalintan waxay dareen ahaan ay aad ugu faraxsanaayeen maalintan haween weynaha Aduunka ,waxaana ay ku labisnaayeen dharka ka sameysan calankeena Buluuga ah,Haween uu ka muuqday u diyaar garowga maalintan qiimaha weyn u leh dhamaan Haweenka Aduunka ,sidoo kale waxaa si weyn loo adkeeyay amaanka goobta ay munaasabadu ka dhaceysay.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ayaa salaam sharaf ka qaatay cutubyo ciidanka Booliska Soomaaliyeed ka tirsan iyadoo Kooxda Baambeyda ee ciidanka Booliska Soomaliyeedna ay garaaceen Astaanta Qaranka Soomaaliyeed.
Intaas ka dib gabdhaha ciidanka ah ee Booliska iyo Militariga ah iyo sidoo kale haweenkii kale ee kasoo qeyb galay munaasabada ayaa socod ku maray halka uu fadhiyay Madaxweynaha dalka.
Qaar ka mid ah Haweenkii Munaasabadan ka qeyb galay oo aa la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin u dabaaldega munaasabada 8,da Maarso.
Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya Sahro Maxamed Cali Samatar oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay wasaarada Haweenka ay sanadkan diyaarisay qorshayaal lagu horumarinayo Haweenka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hamblayo ku aadan 8,da maarso u diray Haweenka Soomaaliyeed iyo guud ahaan Haween weynaha Aduunka.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in Haweenka Soomaaliyeed ay kaalin weyn ka qaateen horumarka dalka.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dhamaan haweenka Soomaaliyeed in sanadkan 2015,ka uu noqdo sanad ay horumar balaaran sameeyaan haweenka Soomaaliyeed isla markaana ay sameeyaan mashruucyo badan oo lagu abuurayo haweenka Soomaaliyeed.
Sanadka markuu ahaa 1977-dii ayay aheyd markii Qaramada Midoobay ay u aqoonsatay 8,da bisha Maarso in ay tahay maalinta Caalamiga ah ee Haweenka Aduunka ,waxaana sanad walba laga xusaa guud ahaan dalalka Caalamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Ra’iisul wasaare Cumar oo kulamo la leh Waxgaradka gobolada Mudug iyo Galgaduud